Fiendrika - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Fitodika (fitsipiteny))
Ny fiendrika na fitodika dia toetra ara-pitsipiteny ananan' ny teny amin' ny sokajin-teny sasany, indrindra ny matoanteny (atao entimilaza), izay hita taratra amin' ny fiovan' endrik' ilay teny sy ny heviny ka mampitodika io teny io amin' ny lazaina. Ny fiendrika na fitodika fantatra indrindra ao amin' ny fiteny maro dia ny fitodika mpanao na fiendrika mañano sy ny fitodika iharana na fiendrika anoina. Ao amin' ny fiteny malagasy dia mbola ahitana ny fitodika toe-javatra na fiendrika añanovana. Arakaraka ny mpahay teny no anavahana na tsia ny atao hoe fitodika sy ny hoe fiendrika.
Ampiasaina ny hoe "fiendrika" raha toa ka tena manova endrika ny teny (matoanteny, ohatra) ny fampiharana fiofohana amin'ny fehezanteny, fa ny hoe "fitodika" raha tsy misy manamaro ny karazan' endriky ny teny (matoanteny, ohatra) ny fampiharana fiofohana amin' ny fehezanteny. Raha izany, ohatra, dia tsy misy afa-tsy fiendrika roa ao amin'ny fiteny frantsay, dia ny fiendrika mañano (frantsay: voix active) sy ny fiendrika anoina (frantsay: voix passive), nefa ireo fiendrika roa ireo dia mety hanambara fitodika maro izay ataon'ny fitsipiteny mahazatra hoe "fiendrika" (frantsay: voix) ihany raha tokony ny teny hoe "fitodika" (frantsay: diathèse) no hampiasaina.
1 Fiendrika sy fitodika ao amin'ny fiteny malagasy
1.1 Ny fiendrika ao amin'ny fiteny malagasy
1.1.1 Ny fiendrika mañano
1.1.2 Ny fiendrika anoina
1.1.3 Ny fiendrika añanovana
1.2 Ny fitodika ao amin'ny fiteny malagasy araka ny haiteny araka anjara asa
1.2.1 Fitodika mahakasika ny matoanteny
1.2.2 Fitodika tsy mahakasika ny matoanteny
1.3 Fitodika ao amin'ny fiteny malagasy araka ny haiteny ara-piofohana
1.3.1 Fitodika fototra
1.3.2 Fitodika sampana
2 Fiendrika sy fitodika ao amin'ireo fiteny eoropeana
2.1 Ny fiendrika mañano
2.2 Ny fiendrika anoina
2.3 Ny fiendrika tampody
2.3.1 Fitodika tampody
2.3.2 Fitodika mpifanao na mitoina
2.3.3 Fitodika anoina na iharana
2.3.4 Fitodika manao na sehatra
2.4 Ny fiendrika na fitodika anelanelany
2.4.1 Ny fiendrika anelanelany ao amin'ny fiteny grika taloha
2.4.2 Ny fitodika anelanelany ao amin'ny fiteny eoropeana ankehitriny
Fiendrika sy fitodika ao amin'ny fiteny malagasyHanova
Nivoatra avy amin'ny fakana tahaka ny fitsipiteny tranainy mahazatra ho an'ny fiteny eoropeana ka nankaty amin'ny fitsipiteny vokatry ny fikarohana amin'ny haiteny malagasy ny fandalinana ny amin'ny atao hoe fiendrika na fitodika ao amin'ny fiteny malagasy. Ny mpahay teny rehetra amin'izao anefa mbola tsy mitovy hevitra ny amin'izany, ka ny tena fantatra dia ny fitsipiteny araka ny haiteny araka anjara asa izay notarihin'i Siméon Rajaona sy ny fitsipiteny araka ny haiteny ara-piofohana tarihin-dRabenilaina Roger Bruno.
Ny fiendrika ao amin'ny fiteny malagasyHanova
Ny fiendrika dia miankina amin'ny endriky ny tsirinteny amin'ny matoanteny tsy ampifandraisina amin'ny lazaina sy ny fameno. Io no atao amin'ny teny frantsay hoe voix na amin'ny teny anglisy hoe voice. Ireto avy ireo fiendrika ireo: ny fiendrika mañano, ny fiendrika anoina ary ny fiendrika añanovana.
Ny fiendrika mañanoHanova
Ao amin'ny fitsipiteny ara-piofohana, izay nanitsy ny heverin'ny mpanoratra azy ho zavatra diso tao amin'ny fitsipiteny teo aloha, dia mahaleo tena ny fiendrika mañano sady tsy mahakasika afa-tsy ny matoanteny. Matetika manomboka amin'ny tsirinteny m- (na n- sy h- raha lasa na hoavy) ny matoanteny amin'ny fiendrika mañano. Araka ny haiteny ara-piofohana dia mitsinjara ara-kevitra amin'ny fitodika atao hoe "fitodika fototra" ny matoanteny amin'ny fiendrika mañano, dia ny fitodika mihatra, ny fitodika tsy mihatra, ny fitodika mamoatra ary ny fitodika mitoina.
Mikapa hazo amin'ny antsy ny ankizy. Mitaraina ny vahoaka noho ny ataon'ny mpitondra.
Ny fiendrika anoinaHanova
Ny fiendrika anoina dia endriky ny matoanteny izay matetika ahitana tovona a- na tovana -ina na -ana. Raha ny lafiny ara-kevitra no jerena dia tsy tokana ny hevitra voizin'ny fiendrika anoina fa maro, dia ireo atao hoe fitodika zoina, dia ny fitodika zoina iharana, ny fitodika zoina fitaovana, ny fitodika zoina tanty, ny fitodika zoina tolorana, ny fitodika zoina toerana ary ny fitodika zoina alalana.
Kapain'ny ankizy amin'ny antsy ny hazo.
Aketsa ny vary.
Akapan' ny ankizy ny hazo ny antsy.
Ny fiendrika añanovanaHanova
Ny fiendrika añanovana dia endriky ny matoanteny izay foronin'ny tsirinteny sara-droa sy ny fototeny. Amin'ny fitsipiteny mahazatra dia ny fitodika toe-javatra (fitodika toe-javatra fotoana, fitodika toe-javatra toerana, fitodika toe-javatra fomba ary fitodika toe-javatra antony, araka ny haiteny ara-piofohana) no voiziny nefa mety ho fitodika zoina (fitodika zoina fitaovanana, fitodika zoina alalana, fitodika zoina toerana, fitodika zoina tolorana), izay efa hita ao amin'ny fiendrika anoina, izany .
Ikapan'ny ankizy ny hazo ny antsy.
Ny fitodika ao amin'ny fiteny malagasy araka ny haiteny araka anjara asaHanova
Tsy navahan'ilay mpahay teny Siméon Rajaona ny hoe fitodika sy ny hoe fiendrika. Amin'io mpahay teny malagasy io dia maro ny fitodika ao amin'ny fiteny malagasy, sady tsy ny matoanteny ihany no voakasika fa ny reniteny sasany toy ny anarana sy ny mpamari-toetra koa. Naorin'ilay mpahay teny amin'ny endriky ny tsirinteny ao amin'ny matoanteny na amin'ny sokajin-dreniteny hafa azo atao entimilaza sy ny karazana fameno azo atao lazaina ampiarahina aminy izany fanavahana ny karazana fitodika izany.
Fitodika mahakasika ny matoantenyHanova
Ireto ny fitodika fototra mahakasika ny matoanteny:
Fitodika mpanao: Mikapa hazo amin'ny antsy ny ankizy.
Fitodika sehatra: Mitaraina ny vahoaka noho ny ataon'ny mpitondra.
Fitodika mpandray: Tolorana tanana ireo mila fanampiana.
Fitodika mpamari-toe-javatra: Ikapan'ny ankizy ny hazo ny antsy.
Fitodika mpampanao: Mampikapa hazo ny ankizy ny mpampianatra.
Fitodika mpifanao: Mifampikapa amin'ny antsy ny ankizy.
Fitodika tsy mahakasika ny matoantenyHanova
Ireto kosa ny fîtodika tsy mahakasika ny matoanteny fa ny reniteny hafa toy ny anarana sy ny mpamari-toetra sns.
Fitodika tsaraina: Tsemboka ilay mpangalatra.
Fitodika tompon-javatra: Fotsy volo izany lehilahy izany.
Fitodika mpamari-toe-javatry ny tsaraina: Nahatsemboka ilay mpangalatra ny fanenjehana azy.
Fitodika mpamari-toe-javatry ny tompon-javatra: Ny fahasahiranana no nahafotsy volo izany lehilahy izany.
Fitodika ao amin'ny fiteny malagasy araka ny haiteny ara-piofohanaHanova
Araka ny hevitr'ilay mpahay teny atao hoe Rabenilaina Roger Bruno dia tsy mahakasika afa-tsy ny matoanteny ny fitodika sy ny fiendrika. Ny hoe fitodika sy fiendrika dia anarana roa iantsoana zavatra roa samy hafa ao amin'ny fiteny nefa misy ifandraisany, ka ny voalohany mahakasika ny endriky ny matoanteny ary ny faharoa kosa momba ny hevitry ny matoanteny.
Ny fitodika dia miankina amin'ny hevitry ny matoanteny mifandray amin'ny vara sy ny fameno ary ny teny mety mampifandray (mpampiankin-teny) ny vara matoanteny amin'ny fameno, raha atao lazaina io fameno io. Ny fitodika no atao amin'ny teny frantsay hoe diathèse fa amin'ny teny anglisy hoe diathesis. Ireto avy ireo fitodika ireo izay misokajy roa, dia ny fitodika fototra sy ny fitodika sampana
Fitodika mihatra: Nividy hena izahay. (misy fameno zoina iharana)
Fitodika tsy mihatra: Mitrena amin'ny alika ny omby. (misy fameno zoina tsy iharana)
Fitodika mamoatra: Nampividy hena anay ny reninay. (misy tsofoka -amp-)
Fitodika mitoina: Mifampijery maharitra izy roa. (misy tsofoka -if-)
Ny fitodika toe-javatra dia misy karazany maro:
Fitodika toe-javatra fotoana: Isakafoanana matetika ny antoandro.
Fitodika toe-javatra toerana: Anangonany ahitra ny any an-tsaha.
Fitodika toe-javatra fomba: An-katezerana no namaliany ny fanontaniako.
Fitodika toe-javatra antony: Ahazoana entana maro ny fihenam-bidy.
Ny fitodika zoina dia misy karazany enina:
Fiendrika sy fitodika ao amin'ireo fiteny eoropeanaHanova
Roa na telo ny fiendrika fantatra indrindra ao amin'ireo fiteny eoropeana: ny fiendrika mañano sy ny fiendrika anoina. Manampy azy ireo ny fiendrika tampody na ny fiendrika anelanelany.
Ny matoanteny amin'ny fiendrika mañano dia hita ao amin'ny fehezanteny manana lazaina mpanao asa na manana ilay toetra resahina ao amin'ny matoanteny entimilaza (na vara). Ny fiteny eoropeana rehetra dia ahitana io fiendrika io.
Amin'ny ankapobeny ny matoanteny amin'ny fiendrika mañano izay azo asiana fameno iharana mivantana dia afaka miova hanana fiendrika anoina. Izany hoe tsy ny matoanteny amin'ny fiendrika mañano rehetra no azo avadika hanana fiendrika anoina.
Ho an'ireo mpikaroka ao amin'ny haiteny ara-piofohana dia misampana avy amin'ny matoanteny mañano ny matoanteny amin'ny fiendrika anoina. Amin'ny fiteny sasany, ny fampitodihana ny fehezanteny amin'ny anoina dia mety hanova endrika ny teny (anarana na mpisolo sns) atao lazaina (ilay teny fameno ao amin'ny fehezanteny manano).
Matetika koa dia ialohavan'ny mpampiankin-teny milaza ny mpanao ny asa ilay anarana na mpisolo sns mitana ny anjara asa fameno (ilay teny nitana ny anjara asa lazaina tao amin'ny fehezanteny manano). Izany mpampiankin-teny izany dia ny hoe par ao amin'ny fiteny frantsay, by ao amin'ny fiteny anglisy, ab ao amin'ny fiteny latina sns. Ao amin'ny fiteny sasany dia ilaina ny fampiasana matoanteny mpanampy apetraka eo alohan'ny ova-matoanteny (être ao amin'ny fiteny frantsay, be ao amin'ny fiteny anglisy, sns) nefa ny fiteny sasany tsy mila an'izany.
Ny fiendrika tampodyHanova
Amin'ny fiteny eoropeana sasany, toy ny fiteny frantsay, no ahitana io atao hoe fiendrika tampody io. Mitovy amin'ny fiendrika manano ihany izy nefa ahitana mpisolo tena fameno izay tsy misaraka amin'ilay matoanteny sady mitovy laharana amin'ny mpisolo tena lazaina. Ireto avy ny hevitra na fitodika mety hananan'ny matoanteny amin'ny fiendrika misy mpisolo:
Ny fiteny malagasy dia mampiasa ny teny hoe tena mba hananterana ny fitampodian'izay atao amin'ny mpanao azy nefa matetika tsy ilaina izany. Ny fiteny anglisy kosa mampiasa ireto mpisolo tena ireto: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves mba handikana ny fitampodian'ny asa amin'ny mpanao azy. Ao amin' ny teny frantsay dia ampiasaina ny mpisolo tena fameno hoe me, te, se, nous ary vous (izay mety hohamafisina amin' ny hoe moi-même, toi-même, soi-même, lui-même, elle-même, eux-mêmes, elles-mêmes, nous-mêmes, vous-mêmes) mba hanehoana ny fitodika tampody.
Je me regarde dans le miroir (ara-bakiteny: "Mijery tena ao amin' ny fitaratra aho" = "Mijery fitaratra aho")
Fitodika mpifanao na mitoinaHanova
Fitodika anoina na iharanaHanova
Fitodika manao na sehatraHanova
Ny fiendrika na fitodika anelanelanyHanova
Ny fiendrika anelanelany (izay atao hoe koa "fiendrika anelanelany anoina") dia fiendrika hita ao amin'ny fiteny indo-eoropeana (ohatra: ny fiteny grika taloha sy ny fiteny sanskrita sy ny fiteny latina ary ny fiteny islandey). Ny matoanteny amin'ny fiendrika anelanelany ao amin'ny fiteny grika taloha dia miafara amin'ny -ομαι (-omai) izay fiafaran'ny matoanteny amin'ny fiendrika anoina nefa tsy voatery hanana hevitra anoina.
Raha ny heviny no jerena dia ahitana azy ihany koa ny fiteny sasany ankehitriny nefa tokony hatao hoe fitodika fa tsy fiendrika izany satria mitovy amin'ny fiendrika mañano ihany. Saika hitovy amin'ny fiendrika tampody ao amin'ny fiteny frantsay izy nefa tsy mampiasa mpisolo tena fameno mitovy laharana amin'ny mpisolo tena misahana anjara asa lazaina. Indraindray koa dia atao hoe "fiendrika anelanelany" ny fiendrika tampody.
Ny fiendrika anelanelany ao amin'ny fiteny grika talohaHanova
Ny fiteny grika taloha dia ahitana ny fiendrika manano sy anoina ary anelanelany, ka ny fiendrika anelanelany no horesahina eto.
Λούομαι (Loúomai) "Misasa aho",
Ἳσταμαι (Hístamai) "Mitsangana aho",
Παύομαι (Paúomai) "Mijanona aho".
Μάχομαι (mákhomai) "Miady aho".
Δέχομαι (dékhomai) "Mandray aho".
Ny fitodika anelanelany ao amin'ny fiteny eoropeana ankehitrinyHanova
Ny fiteny eoropeana ankehitriny dia heverin'ny mpahay teny sy ny mpanao fitsipiteny sasany fa manana io atao hoe fiendrika na fitodika anelanelany io nefa tsy amin'ny fiendrika anoina (ny an'ny fiendrika anelanelany ao amin'ny fiteny grika) ny endriky ny matoanteny fa amin'ny fiendrika mañano.
Rabenilaina Roger Bruno, Ny fifehezanteny malagasy Archived Desambra 3, 2019 at the Wayback Machine, Foibe momba ny teny, an'ny Akademia malagasy Archived Septambra 18, 2018 at the Wayback Machine.
Siméon Rajaona, Ny matoanteny eo amin'ny teny malagasy Archived Desambra 3, 2019 at the Wayback Machine, Foibe momba ny teny, an'ny Akademia malagasy Archived Septambra 18, 2018 at the Wayback Machine.
Siméon Rajaona, Structure du malgache, étude des formes prédicatives, Fianarantsoa, Ambozontany, 1972.
Siméon Rajaona, Eléments de morphologie inflexionnelle du malgache, les phénomènes morphologiques, Antananarivo, Ambozontany, 2004.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiendrika&oldid=1045587"
Dernière modification le 7 Jiona 2022, à 11:24
Voaova farany tamin'ny 7 Jiona 2022 amin'ny 11:24 ity pejy ity.